UManson Ilungu Lentsapho I-Tex Watson
Iprofayile kaCharles Tex Watson - Icandelo lokuqala
I-Right Hand Hand Man kaCharlie Manson
UCharles "Tex" Watson waphuma ekubeni "umfundi" kwisikolo sakhe esiphakeme saseTexas ukuba abe ngumyeni waseCharles Manson kunye nombulali obandayo. Wakhokelela ekubulaweni kwimizi yokuhlala yaseTate naseLaBianca kwaye wathatha inxaxheba ekubulaleni ilungu ngalinye lemizi yomibini. Ufunyaniswe enetyala lokubulala abantu abasixhenxe, uWatson uhlala ejele entolongweni, ungumfundisi ogqityiweyo, watshata kunye noyise wesithathu.
UCharles Watson's Childhood Years
UCharles Denton Watson wazalelwa eDallas, eTexas ngoDisemba 2, 1945. Abazali bakhe bahlala eCopeville, eTexas, idolophana elincinci apho babesebenza khona kwisikhululo segesi kwaye bachithe ixesha ecaweni yabo. I-Watsons yayikholelwa ephupheni laseMerika kwaye yasebenza kanzima ukubonelela ubomi obungcono kubantwana babo abathathu, apho uCharles wayengumncinci. Ubomi babo babenokuthobeka ngokwezimali, kodwa abantwana babo babevuya kwaye belandela iindlela ezifanelekileyo.
Iintsuku zokuqala kunye neKholeji
Njengoko uCharles ekhulile wabandakanyeka ecaweni yomzali wakhe, eChurchville Methodist Church. Wayekhokelela enkonzweni yecawa yolutsha kwaye wayehlala rhoqo kwiinkonzo zevangeli zeCawa ebusuku. Esikolweni esiphakeme, wayengumfundi ozukileyo kunye nomdlali omhle kwaye wafumana udumo njengenkwenkwezi yendawo yokuhlaziya ngokuphula iirekhodi kwiingxaki eziphezulu. Wayesebenza njengomhleli wephepha lesikolo.
UWatson wayezimisele ukuya kwikholeji aze asebenze kwisityalo se-anyanisi sokupakisha ukugcina imali. Ukuhlala kwidolophu yakhe encinci kwakuqala ukuvalela kuye kunye nengcamango yokufumana inkululeko nokuzimela ngokuya kwiikholeji ezingama-50 ukusuka kude ekhaya. NgoSeptemba 1964, uWatson waya eDenton, eTexas waza waqala unyaka wakhe wokuqala kwiNyuvesi yaseNorthern Texas State (NTSU).
Abazali bakhe baziqhenyce ngonyana wabo noWatson babenomdla kwaye bekulungele ukufumana inkululeko yakhe entsha.
Kwikholeji yesikhokelo kwangoko yathabatha isihlalo sesibili ukuya kwimibutho. UWatson wajoyina i-Pi Kappa Alpha ubudlelwane kwi-semester yakhe yesibini kwaye ugxininiso lwakhe lugqitha ukusuka kwiiklasi zakhe ukuya kwisondo kunye notywala. Wathatha inxaxheba kwezinye iindawo zokubambisana kwamanye amazwe, ezinye zikhulu kunabanye. Omnye wayebandakanye ukuba, kwaye ngokokuqala ngqa ebomini bakhe wayefanele adideke abazali bakhe ngokuvuma ukuba waphula umthetho. Iintetho zabazali bakhe zahluleka ukuvimbela umnqweno wakhe wokubuyela kwi-campus fun.
I-Watson yokuqala Yokubonakalisa Izidakamizwa
NgoJanuwari 1967 waqala ukusebenza eBransff Airlines njengenkwenkwe yempahla. Wafumana amathikithi eenqwelo-moya ezikhululekile awayezisebenzisayo ukuthabatha amantombazana akhe ngokubahamba ngeeveki ukuya eDallas naseMexico. Wayefumana intlekele yehlabathi kude neTexas kwaye wayethanda. Ngethuba lokutyelela kwikhaya lomzalwana waseLos Angeles, uWatson wathathwa ngumoya we-psychedelic wezidakamizwa kunye nothando lwamahhala olwalithatha i-Sunset Strip ngexesha lama-60s.
Ukusuka eTexas ukuya eCalifornia
Ngo-Agasti 1967, u-Watson washiya i-NTSU kwaye wayesebenzisa inkululeko yakhe yonke inkululeko-eLos Angeles. Ukuze agcine isithembiso kubazali bakhe ukugqiba iikholeji waqala ukuya kwiiklasi kwi- Cal State ngokuphathwa kwezoshishino.
Iingubo zakhe ezinqwenelekayo ezigqithisiweyo zaxoshwa ngenxa yokubukeka kwe-hippie epholile kunye nokukhethwa kwakhe "okuphakamileyo" kuye kwatshintsha utshintshi ukuya kutshekeni. UWatson wathanda ukuba yinxalenye yeqela elahlula ngokwasekwayo kwaye bamkela.
Kwiinyanga ezimbalwa zokuba ulapho, uWatson wathatha umsebenzi njengomthengisi wiguqu kwaye washiya iKar State. Wathuthela eWest Hollywood waza waya kuLaurel Canyon kwindlu emva komgca. Unina wakhe weza kumtyelela emva kwexesha elilodwa emva kokuhlaselwa kwengozi enkulu yemoto. Engathandeki ngendlela yakhe yokuphila, wamncenga ukuba abuyele eTexas kwaye nangona inxalenye yakhe yayifuna ukubuyela edolophini lakhe, ukuziqhenya kuye kwamgcina engazange ahambe. Akayi kuphinda ambone kwakhona emva kokuba ebalekele ukubulala abantu abasixhenxe.
UWatson waqala ukusebenzisa inambuzane kwaye yena kunye naye ohlala naye wavula i-wig shop ebizwa ngokuba yi-Love Locs.
Ivalwe ngokukhawuleza kwaye uWatson waqala ukuxhomekeka kwiinkcitho zamachiza ukuhlawula ikhaya lakhe elwandle elitsha. Iminqweno yakhe yokufumana imali ngokukhawuleza ichithekile ukuba ifune ukuphakama, iya kwiikonkethi zerhawuni uze ulale elunxwemeni. Ekugqibeleni waphendukela kwinto ayecinga ukuba yayingu-hippie yexesha elizeleyo kwaye wayeva ukuba wayefumene indawo yakhe emhlabeni.
Intlanganiso Eyatshintsha Ubomi Bakhe Ngunaphakade
Ubomi bukaWatson butshintshile ngonaphakade emva kokuthabatha i-hitchhiker eyayiyiDennis Wilson, ilungu leqela lelawa, iBlack Boys. Emva kokufika kwindlu yaseWilson yasePacific Palisades, uWilson wammema uWatson ukuba afune ukubona indlu aze ahlangane nabantu bexhomekeka apho.
Waziswa kubantu abahlukahlukeneyo, kuquka uDean Moorehouse, umfundisi wase-Methodist kunye noCharlie Manson. UWilson wammema uWatson ukuba abuyele kwindlu yonkanye naluphi na ixesha ukuba aphephe aze adibise kwisibini saseOlimpiki.
Indlu yayigcwele abalahla abaye baxhonywa besenza iziyobisi kunye nokuphulaphula umculo. Ekugqibeleni uWaston wathuthela kwindawo yokuhlala apho adibaniswa nabaculi beetha, abadlali, abantwana beenkwenkwezi, abavelisi baseHollywood, uCharlie Manson kunye namalungu kaManson "Uthando Lwentsapho." Wachukunyiswa yena ngokwakhe, inkwenkwe yaseTexas - ukuxubha iindwangu ezidumileyo kwaye wayedonsa kuManson kunye nentsapho yakhe, ekhangeleka ku-Manson ukuprofeta kunye nolwalamano lwamalungu entsapho lwabonakala lubonisana.
UWatson waqala ukwenza ii-hallucinogens ezinzima rhoqo kwaye wagqitywa ngombono omtsha owenziwe ngamachiza apho wayekholelwa uthando kunye nokubophelelana okunzulu kwabanye.
Wachaza ngokuthi "uhlobo olusondeleyo nolunzulu kunokuba lube ngesondo." Ulwalamano lwakhe kunye noDean lwalujonge kunye kunye nabaninzi "bamantombazana" kaManson, bobabini abakhuthaza uMatson ukuba baxoshe kwi-ego yakhe, kwaye bajoyine umndeni kaManson.
Ukujoyina uMtsapho WaseManson: UWilson waqala ukusuka kwiindawo eziqhelekileyo ezazihlala kwindlu yakhe emva kokuba izikhalazo zokuxhashazwa kwabantwana ngokwesondo ziqhutywe. Umphathi wakhe watshela uDean, Watson kunye nabanye abahlala khona ukuba baya kuhamba. Ngendawo engayi kuyo, uDean noWatson bajika kuCharlie Manson. Ukwamkelwa kwakungekho ngokukhawuleza, kodwa ngelo xesha igama likaWatson lishintsha ukusuka kuCharles ukuya kwi "Tex", wajika yonke impahla yakhe kuCharlie waza wahlala kunye nosapho.
Indlela Yakhe yokubulala yayiyi-Poison and No Child was Safe, uJanie Lou Gibbs
UBrian Nichols: I-Atlanta Courthouse Killer
Umxholo ka Andrea Yates
Julissa Brisman: Uxhoba lombulali we Craigslist
Icala likaJaycee Lee Dugard
7 I-Buzzwords Uninzi kakhulu ukuva kwiMfundo
IzeMpilo, ukhuseleko kunye nezondlo
Indlela yokufumana i-ACT ACT Old
Isiqendu esinxulumene nesithintelo
IPhasika: Iikhopu ezine zewayini
Hlola oku 20 "Amagama asePunny" kakhulu
Inkcazo yeCandelo loLawulo lweSizwe kunye nemizekelo
'Iintsapho' Isigama lesiFrentshi
Ikhalenda ye-Australian Golfers yeGrafti ibangela ukuphikisana
Indlela yokulinganisa i-Age Tree Tree
Indodakazi kaTiger yeTy Wood Is Sam Alexis Woods
Hlangana nabalinganiswa kwi-'Amerika yaseYamerika! '
Invention kunye neMbali yamaRebethi
Adem College College
Blister beetles, Family Meloidae
'Faire': Ukudibanisa kwesi siLwimi esikhulu sesiFrentshi
Umthandazo WesiKlasi kuYesu e-Manger
Indlela yokubiza uDeng Xiaoping
Indlela Ubuchwepheshe Abancinci Ukuqhuba Umnotho We-US
Indlela yokuya kwiKholeji - Isinyathelo ngeNqanaba leNqununu ukuya kuKholeji
Iikholeji zeeKholeji eziphezulu